Track 5: You Don't Know — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Sida aad i helay si sare ma arko i hoos imanaya
Haddii aad ogtihiin waxa aan ku dhex tegey, laakiin waxaan weli hadda taagan
Oo waxaad ogaan Waxba igama gelin ku saabsan nacaybka lahayn
daruuraha Kuwani wejiga
Baan ka heli sare, sare, sare
Waxaad ma aqaano waxa uu ii sameeyey aawadood
Waxaad ma oga (5X)
Majiire sare oo aan dareemayo free
Helay igu dareemayaa sida Cleveland markay ayaa sheegay in Xiddiga Diirada dib
Waxaan doonayaa inaan maraan tuuro la streamers iyo in dhammaan, Waxaan dareemayaa wanaag
Oo haddii aad ka akhriyi in King James
Waxaad dhihi kartaa waxaan wanaagsan mana Cusleeyo, illowdaa xumad roobka
Ha illoobin oo ku saabsan hillaaca madaxayga ka badan
Bruh anigu ma dareemi kartaa dhulka, ma barroosinno on lugaha aan
Waxaan hor timi off maanta aan sariirta ma
Cagaha ku deldesheen oo sida yaalo qaar ka mid ah, laakiin ha weecin wixii aan idhi
Marka waxaan idinku leeyahay ayaan sabayn sare sida abid
Waxaan ula jeedaa ma in mile Denver tijaabadooda sare, Waan ku samayn karaa fiican
ma duurjoogta ah waxaan ku samayn baxay iyaga in kooxaha habeenkii cod weyn, Anigu weligayba waxaan helay
Iyada oo ugu sarreeya waxaan ku dhuftay jaakbotyada aan kabaalka lahayn
Ha igu noqon cad, Ilaaha keligiis ah, waxaan ka cabsanayaa
Deggan meel sare oo quduuska ah oo Bro halkan Wuxuu i helay
Naftaydu helay iibsaday oo aan dembigayga helay bilowday
Ma noqon doonto celinta lahayn, diyaariyaan wiish off
Brandon • December 9, 2014 at 5:24 waxaan ahay • Reply
song Tani… Ilaahay ha barakeeyo laga yaabaa in aad si weyn u safrayaan. Oo waxaad heli doontaa si fiican ugu dhakhsaha badan haddii Rabbigu wuxuu leeyahay isku mid.
Just ka yaabban – ma qayb ka mid ah oo ku saabsan “Obama Biden” ka dhigan tahay in aad u codeeyay iyo / ama taageero madaxweyne Obama ee? Sida Christian a, Waxaan jeclaan lahaa in ay taageeraan madaxweynaha ah African-American – laakiin ma aha cadeeyay in Obama taageertaa wax ka mid ah kuwa aan cibaadada lahayn? Waxaan qiyaasayaa in aad aad u mashquul tahay, laakiin mahad ka hor si aad u eegto.